နေအိမ် / Archives for Argentina Arbitration
ဤကိစ္စတွင်အတွက်တောင်းဆိုသူကော်ပိုရေးရှင်းမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသ၏လက်အောက်ခံခဲ့, S.A., ရေထုတ်လုပ်မှုအထူးပြု, ရေကုသမှု, ရေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး. အဆိုပါတောင်းဆိုသူပါဝင်ခဲ့နှင့်အာဂျင်တီးနားကုမ္ပဏီ Obras Sanitarias Mendoza ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင် Mendoza ၏ပြည်နယ်ကလေလံအနိုင်ရခဲ့ဖူး ("OSM"). OSM နှင့်ပြည်နယ်ထို့နောက်တစ်ဦးလိုက်လျောလက်မှတ်ရေးထိုး […]
IMPREGILO S.P.A. V ကို. အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ (ICSID ပြဿနာ NO. ARB / 07/17) - ၏ Awards 21 ဇွန်လ 2011
03/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တွင် 1996, တောင်းဆိုသူ Buenos Aires ရဲ့ပြည်နယ်၏ရေနှင့်ရဆေိုးန်ဆောင်မှုကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်တစ်ဦးလိုက်လျောများအတွက်စာချုပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်. စာချုပ် execute မှ, AGBA ထည့်သွင်းတောင်းဆိုသူ (တစ်ဦးအာဂျင်တီးနားကုမ္ပဏီ). စာချုပ်လက်အောက်တွင်, AGBA စုဆောင်းဖို့သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ဝယ်ယူ, စားသောကျပှဲ, တင်ဆောင်, ရေနှင့်မိလ္လာဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်နှင့်, ပြန်, ခဲ့ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်
Saint-GOBAIN performance ပလပ်စတစ်ဥရောပ V ကို. ဗင်နီဇွဲလား၏ BOLIVARIAN သမ္မတနိုင်ငံ (ICSID ပြဿနာ NO. ARB / 12/13) – ၏ခုံသမာဓိ DISQUALIFY အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်း ON ဆုံးဖြတ်ချက်ချရ 27 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013
19/05/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပေါ် 25 မေ 2012, Saint-Gobain စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပလတ်စတစ်များဥရောပပြင်သစ်နှင့်ဗင်နီဇွဲလား၏အကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အားပေးမှုနှင့်အပြန်အလှန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်သဘောတူညီချက်မှပြိုပျက်ရာတို့ကိုအဘို့အဗင်နီဇွဲလား၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံဆန့်ကျင်ခုံသမာဓိများအတွက်တောင်းဆိုမှုတင်သွင်း 15 ဧပြီလ 2004. တစ်ဦးချင်းစီပါတီအားဖြင့်ခုံသမာဓိလူကြီးများချိန်းပြီးနောက်, အဆိုပါခုံသမာဓိရုံး၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီများအတွက်တင်သွင်းတောင်းဆိုသူ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, တရားမျှတရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ဗင်နီဇွဲလားအနုညာတစီရင်